Football Khabar » च्याम्पियन्स लिग : रियल मड्रिड म्यानचेस्टर सिटी अन्तिम १६ मै भिड्ने !
च्याम्पियन्स लिग : रियल मड्रिड म्यानचेस्टर सिटी अन्तिम १६ मै भिड्ने !
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत जारी सिजनका लागि अन्तिम १६ को ड्र को सार्वजनिक भएको छ । सोमबार अपराह्न स्वीट्जरल्यान्डको नियोनस्थित युइएएफएको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको ड्र अनुसार सर्वाधिक १३ पटकको च्याम्पियन रियल मड्रिडले कठिन प्रतिस्पर्धी पाएको छ ।
रियल र इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी यसपटक अन्तिम १६ मै भिड्ने भएका हुन् । यस ड्रलाई प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कठिन ड्र मानिएको छ । रियल समूह चरणबाट उपविजेता बनेर अन्तिम १६ मा जाँदा रियल सिटी विजेता बनेको थियो ।
प्रकाशित मिति ३० मंसिर २०७६, सोमबार १६:५२